SomaliaReport: Mareykanka Taageeray Dullanka Kenya
By ABDIKAFAR HOSH 10/30/2011
Dowladda Mareykanka oo dafirtay inay ka qaybqaadanayaan hawlgalka ciidamada Keenya kaga soo horjeedaan al-Shabaab.
Scott Gration, Ambaasadorka Mareykanka u fadhiya Keenya, ayaa wariyayaal u sheegay in dowladdiisu taakulayn qalab oo keliya u fidisay Ciidamada Difaaca Keenya (CDK) dullaanadooda milatari. . Ambaasadoorku wuxuu yiri Washington waxay ka gaday qalab ciidameed siisayna tababar milatari iyo taakulayn ciidamada Keenya si aya uga gargaarto dullaanka milatari ee ay ku qaaday kooxda argagixisada al-Shabaab ee Geeska Afrika.
“Waxaan si cad Keenya uga taageereynay ciidamada badda, dhulka iyo xoogaga hawada muddo aad u dheer waana sii wadaynaa. Taagerayadu waxay tahay mid qalab maadaama aanan Soomaaaliya ku sugnayn...ma aanaan faragelin in intaa ka baxsan, waxaan qabano waa taageerada teknikada ee milatariga Keenya,” ayuu faaleeyey.
Bayaanka ambaasadoorka Mareykanku wuxuu soo baxay todobaad kadib markay diyaaradaha daroonku ku dileen 40 dagaalyahanada al-Shabaab degmada Raas Kaambooni iyo qaybo ka tirsan gobolka Jubbada Hoose.
Wasiirka Arrimaha Dibada, Moses Wetangula ayaa isaguna dafiray in Washignton lug ku leedahay hawlgallada milatari ee Keenya kaga soo horjeedo al-Shabaab.
Wuxuu ka hadlayey shir saxaafadeed uu kula jiray u dhigmihiisa Austaraaliya Kevin Rudd ee Perth, oo ka qaybgalay shirka commonwealth-ka.
Wasiirka nabadsugida gudaha Professor George Saitoti wuxuu talada ka saaray kala xaajoodka meleeshiyaadka al-Shabaab hawlgalada milatari ee ka socda Soomaaliya.
Wuxuu buriyey sheegashadii dawlada Keenya inay diyaar u tahay fursadaha la xaajoodka kooxda xagjirayaasha.
“Al-Shabaab waa urur argagixiso keenyana way xoojinaysaa dagaalka looga soo horjeedo iyaga. Muhimaddu waxay tahay inaan la wada xaajoonayn iyaga waayo waxay haystaan niyad danbiilayaal” ayuu yiri.
Keenya waxay Soomaaliay ka bilowday hawlgalka Linda Nchi 14 cashoo lasoo dhaafay ka dib markii afduub isdaba jooga lagu qaaday shaqaalaha gargaarka iyo dalxiisayaalka ajnabagia ah xudduudooda oo ay ku eedeeyeen al-Shabaab.